War deg deg ah: Maleeshiyo hubaysan oo dad ku leysay magaalada Gaalkacyo – SBC
War deg deg ah: Maleeshiyo hubaysan oo dad ku leysay magaalada Gaalkacyo
Posted by editor on August 26, 2011 Comments
Koox maleeshiyo ah oo hubaysan ayaa goor dhaweyd dad rayid ah ku leysay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Dilkan ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 6 qof tiro kalena way ku dhaawacmeen, waxaana uu ka dhacay xaafada Israac ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Dadka weerarkan ku dhintey ayaa wararku sheegayaan inay ka soo jeedaan gobolada Koonfureed ee dalka, waxaana jira warar isa soo taraya oo ku aadan in dilkani uu salka ku hayo falal dilal & amni xumo ah oo ka oogan magaalada Gaalkacyo.
Xarun idaacadeed oo bam lagu tuuray
Iyadoo falalka amni darada ee ka taagan magaalada Gaalkayo ay sii kordhayaan ayaa habeenimadii xaley waxaa bam nooca gacanta laga tuuro waxaa lagu tuurey xarunta idaacada Daljir ee magaalada Gaalkacyo, iyadoo bamkaais uu geystey dhaawaca qof ilaalo ka ahaa xarunta idaacada, iyadoo qaraxaasi oo laga maqlay magaalada Gaalkacyo uu sidoo kale waxyeelo gaarsiiyey dhisme ku dhaw xarunta idaacada.
Maamul Hotel oo isku day dil ka badbaadey
Maamulaha hoteelka Seylaan Gaalkacyo Sheekh Yaasiin kana mid ah culima’udiinka Gaalkacyo ayaa xaley wuxuu ka badbaadey isku dil oo ay la damacsanayeen koox hubaysan oo rasaas ooda kaga qaadey xili uu ka soo baxay masjid uu ku tukuday salaada maqrib.
Sheekh Yaasin ayaa rasaastii lagu furey waxaa ka soo gaarey dhaawac kooban, waxaana la sheegay in loo fidiyey gargaar caafimaad oo deg deg ah.
Falalkan ugu dambeeyey ee amni xumo ee taagan Gaalkacyo ka noqdey tusbax afka laga furay kuwaasi oo lagu beegsanayo dadka waxgalka ah ee bulshada ka dhexmuuqda.
Deeqo Faarax Nuur (Billan)
Fadlan warbixinta Qoralkeda aya wax ka khaldanyihin ma gaalkacyo aya dadka lagu laayay mise muqdisho
“Dilkan ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen 6 qof tiro kalena way ku dhaawacmeen, waxaana uu ka dhacay xaafada Israac ee waqooyiga magaalada Muqdisho”
aman xumada magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug waxay noqotay wax iska cadiya
eedeeda waxan saarayaa hadan nahay dadka gobolka mamulka puntland oo ayagu masuulka ka ah gobolka . oo aan xilwayn iska sarin marka laga reebo maamul labadalo iyo kuwa cusub oo lamagacabo
reer mudug indheer garadkii iyo aqoonyahankii waxay ay kujiran halis . waxan leeyehay reer mudug isku tashada oo waxs ka qabta gobolkeena kahor inta aan la idin dhamayn